ပဲခူးခရီးစဉ်အတွက်မီဒီယာတွေကတဆင့်ကြည့်လိုက်ရတာကြက်သီးတောင်ထမိတယ်..များပြားလိုက်တဲ့ပ ရိတ်သပ်…အန်တီစုမိန့်ခွန်းကလည်းအတွေ့အကြုံတွေများလာလို့မသိဘူးပိုရင့်ကျက်လာတယ်။အန်တီစု လွတ်လာကထဲက..ပဲခူးခရီးစဉ်အဆုံး..အန်တီစုကိုဝန်းရံနေကြတဲ့..လူပင်လယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီး..(ခင်ဗျားသာအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တဦးဦးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ) ဘယ်လိုမြင်မိမလည်း……
ဒါတွေဟာတကယ်လား..ဖန်တီးယူတာတွေလား..ဖန်တီးထားတာတွေလားဆိုတာ…အားလုံးအသိဖြစ် နေပါ လိမ့်မယ်…ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတာ…ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်ရေးကိုလိုချင် တယ်ဆို တာ ကိုပြသလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲ…ဒါ..ကြွေးကြော်သံတိတ်ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်တယ်…..
ပြည်တွင်းကလူငယ်တွေနဲ့တွေ့တိုင်းကျနော့်ကိုခနခဏမေးတဲ့မေးခွန်းရှိတယ်…ကျနော်တို့ဘာလုပ်ရမ လည်းဘာလုပ်သင့်သလည်းတဲ့…….အားလုံးကယူဆနေတာ..ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာ..၈၈တုန်းကလို၊ရွှေဝါရောင် တုန်းကလိုလူအုပ်ကြီးနဲ့စီတန်းလှည့်လည်မှအထမြောက်တယ်လို့ထင်မြင်ကြတယ်..သူတို့ထင်မြင်ချက်လည်း မှန်ပါတယ်..ဖြစ်နိုင်ရင်လူထုအင်အားနဲ့၈၈တုန်းကလိုသမ္မတအဆက်ဆက်ဖြုတ်ချပစ်ချင်တယ်…အခွင့်အခါ မပေး သေးတဲ့အချိန်မှာ…ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မလွတ်ခင်ကဒေါ်နော်အုန်းလှတို့..ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်တက် ပြီး..၀တ်ပြုဆုတောင်းပွဲတွေအဆက်မပြတ်လုပ်နေတာဟာလည်း..ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်..အံတုမူတမျိုးပဲ..ဆန္ဒပြခြင်းတမျိုးပဲ…တကယ်တော့ရွှေဝါရောင်မှာ ရဟန်းတော်တွေ ချီတက်လှည့်လည်တာ..နိုင်ငံရေးကြွေးကြော်သံနဲ့ လှည့်လည်တာမှမ ဟုတ်တာ..မေတ္တာ ပို့သံတွေနဲ့သွားကြတာ…ဒါ…ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး၊သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့အံတု လိုက်တာ…အာဏာရှင်ဆို တာ..အ ကြမ်း ဖက်အံတုခြင်းကိုသိပ်မဖြုံတတ်ကြဘူး..ဒါပေမဲ့လူထုအင်အားကိုကြ ကြောက်တတ်ကြတယ်…
ကျနော်စဉ်းစားမိတာတခုရှိတယ်….မြန်မာလူထုဟာ..သူတို့အတွက်အန္တယာယ်အနည်းဆုံးနဲ့အထိ ရောက်ဆုံး လမ်းကြောင်းတခုကိုသာတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်အစိုးရကိုအံတုဘို့အသင့်အနေထားမှာရှိတယ်…ဥပမာ. .၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဘာဖြစ်လို့အပြတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့တာလည်း…ပြည်သူ လူထုကြီးအနေနဲ့သူတို့ဆန္ဒတွေကိုထုတ်ဖော်ပြသရာမှာမဲပြားတွေနဲ့ပြသကြတယ်..ဒီနည်းလမ်းကသူတို့အ တွက်အန္တယာယ်နည်းတယ်..ထိရောက်တယ်လို့ယုံကြည်လို့..အပြတ်အံတုခဲ့ကြတာ..ထိုနည်းတူစွာပဲအခွင့် အခါပေး ရင်လူထုဘက်ကအသင့်ရှိတယ်..ဒါဆိုမေးစရာရှိတယ်…ဘာလို့လမ်းပေါ်တက်ဆန္ဒပြမဲ့ ကိစ္စကိုကြတွန့်ဆုတ်ကြတာလည်း?...ဒီကိစ္စမှာအန္တယာယ်တွေရှိတယ်…များတယ်…အဆင်မသင့်ရင်အရိုက် ခံ၊အနှိပ်ခံရတာကအစ.. ထောင်ကျတာ..သေတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်…ဒါ့အတွက်ကြောက်တာ..သဘာဝကျပါ တယ်…….ဒီလိုကြောက်နေ အောင်လည်းအာဏာရှင်များကနှိပ်ကွပ်ထားတာကိုး….ရှစ်လေးလုံးအစမှာလူထု တရပ်လုံးပါဝင်လာတယ်မထင်ပါနဲ့..မပါပါဘူး..သူတို့အတွက်အန္တယာယ်နည်းတယ်လို့ထင်နေတဲ့အ ချိန်ရောက်တော့..တနိုင်ငံလုံးအုံးထသွား တယ်ဆိုတာ..သမိုင်းရှိပါတယ်…ဒါတွေဟာပြည်သူဘက် ကကြည့်မယ်ဆိုရင် တရားနည်းလမ်း ကျတဲ့အရာတွေပါ….အမေရိကားက..လူ့အခွင့်ရေးလွတ်မြောက်မူ့ အတွက်လှုတ်ရှားခဲ့တဲ့လူမဲခေါင်းဆောင်..မာတင်လူသာကင်း ပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်…
ဒီနေ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေရဲ့ဧရာဝတီကိစ္စလက်မှတ်ရေးထိုးလှုတ်ရှားမူ့ဆိုတာ..လူထုအတွက် အန္တယာယ်အနည်းဆုံးနည်းလမ်းတွေနဲ့ ပစ်မှတ်ကိုမှန်အောင်ပစ်နေတဲ့..နည်းဗျူဟာဖြစ် တယ်…တနည်း အားဖြင့် ကြွေးကြော်သံတိတ် ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်တယ်……ဒီကိစ္စမျိုးကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်တယ် လို့အကြံပြုပါ ရစေ။
ထိုနည်းတူစွာပဲ…အရေးကြီးဆုံးတချက်က..ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရောက်ရှိရာနေရာတိုင်းမှာ လူပင်လယ် ကြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါ…ဒါဟာ..ကြွေးကြော်သံတိတ်ဆန္ဒပြနေတာဖြစ်ပါတယ်….ဘာမှထူး ထူးခြားခြား လုပ်ပေးဘို့မလိုပါဘူး….သွေးဆူပြီးနိုင်ငံရေးကြွေးကြော်သံတွေအော်နေစရာလည်းမလိုဘူး….ဒေါ်စု သွား ရာနေရာတိုင်းမှာ…သင်နဲ့ သင့်အသိုင်းဝိုင်း မတ်တပ်ရပ်ယုံလေးသွားရပ်ပေးပါ…….
ဒါဟာ…လက်ရှိအခြေနေမှာ…ကြွေးကြော်သံတိတ်ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်တယ်…..အထွေထွေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပါဝါကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံပေးအပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်….ယနေ့အလုပ်သင့်ဆုံးနိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင် ချက်ဖြစ် တယ်ဆိုတာ အကြံပြုပါရစေ။